I-Semalt: Ukuvimbela isayithi kukhompyutha yakho noma efonini ye-Android
Kungakhathaliseki ukuthi uvikela ingane yakho noma ukufihla ulwazi lomuntu siqu, kunezindlela ezithile zokuvimbela amasayithi angafuneki kusuka kukhompyutha yakho noma kudivayisi yeselula. Abantu abaningi bakhathazekile ngobumfihlo babo be-intanethi futhi bafuna ukuvimba amawebhusayithi athile ukuqinisekisa ukuphepha okuphelele kwabo nezingane zabo. Amanye amawebhusayithi angaqukatha futhi asakaze amagciwane, i-malware, ne-bots. Kunamathuba wokuthi azophinde aqukethe okuqukethwe okucasulayo noma othile angase akhombe imininingwane yakho yangasese. Yiqiniso, ungakwazi ukugwema lezo zingosi, kodwa lokho akuyona into ehlala njalo, futhi kufanele uthathe izinyathelo ezinkulu.
Vimba Iwebhusayithi kuma-computer e-Windows:
uManag Bell, i-14 (Semalt iMenenja yeNtuthuko YeKlayenti, ithi kunezindlela eziningi zokuvimbela iwebhusayithi, futhi ungakhetha indlela esekelwe kusiphequluli sakho, umzila wakho wenethiwekhi, nokusebenza konke uhlelo. Umgogodla omkhulu we-intanethi yisistimu ye-DNS ehumusha elula futhi elula ukukhumbula amagama afana ne-www.google.com namakheli e-IP. Ngesikhathi usebenzisa isiphakeli se-DNS ukuze ufike kumasayithi, ikhompyutha yakho izokwazi okuthiwa ifayela le-Host. Leli fayela lisetshenziselwa ukuvimbela ukufinyelela kumasayithi asolisayo. Indlela elandelayo isebenzayo kokubili kubasebenzisi be-Windows 7 ne-Windows 8:
Udinga ukufinyelela esigabeni somlawuli wekhompyutha yakho bese ungena ngemvume usebenzisa igama lomsebenzisi nephasiwedi, bese uya ku-C: \_ Windows \_ System32 \_ abashayeli \_ njll.
Chofoza kufayili ebizwa ngokuthi yizivakashi futhi ukhethe Inothi lokubhala ohlwini lwazinhlelo. Chofoza inkinobho ye-Ok bese uhlela ifayela.
Ekupheleni kwale fayela, kuzodingeka ufake ama-URL ongafuna ukuwavimba. Ngenxa yalokhu, ungangeza imigqa embalwa ekugcineni kwale fayela, nge-127.0.0..2. Khona-ke kufanele ubhale igama lewebhusayithi futhi livimbe.
Vimba isayithi efonini yakho ye-Android:
Kumsebenzisi we-Android, kukhona amathiphu ambalwa nezinto okufanele uzikhumbule. Uma unayo ifoni egxilile, isibonelo, ungakwazi ukuvimbela kalula amasayithi ngokuhlela ifayela le-Hosts kudivayisi bese uqondisa abaduni kumanye amakhasi ewebhu. Kulokhu, uzodinga imenenja yefayela kanye nomhleli wombhalo. Indlela engcono kakhulu ukusebenzisa i-ES File Explorer, esenza sikwazi ukwenza imisebenzi eminingi ngesikhathi esifanayo.
Faka i-ES File Explorer bese uthepha inkinobho yemenyu phezulu.
Kufolda yesistimu, ungabona ifayela elibizwa ngokuthi amaHlathi. Kumele uthayiphe bese uya kwimenyu e-pop-up. Lapha kufanele ufinyelele inketho ye-ES Note Editor.
Thepha leyo nkinobho yokuhlela bese uhlela ifayela. Lapha kuzodingeka ubhale ama-URL namagama wesayithi ofuna ukuwavimba.
Ungakhohlwa ukuqondisa kabusha i-DNS yabo, bese uthayipha 127.0.0.2 www.blockwebsites.com emgqeni omusha.
Qala kabusha ifoni ye-Android uma wenze izinto ezingenhla
Uma unomuzwa wokuthi le ndlela inzima kakhulu, kufanele ufake izinhlelo zokusebenza ze-antivirus ezifana ne-Trend Micro ezokuvumela ukuba uvimbele amawebhusayithi asolisayo ngokuzenzakalelayo. Kumelwe ufake nje lolu hlelo lokusebenza futhi ulisebenzise. Yiya ku Izinketh> Indawo ephephile bese uswayipha kwiMilayezo Yabazali. Lapha kufanele uchofoze futhi usethe i-akhawunti. Uma i-akhawunti idalwe, ungayibamba njengezivinjiwe ezilondolozwe kuhlelo lakho lokusebenza futhi wengeze amawebhusayithi ongafuna ukuwavimba ngesikhathi.